CGM – Beat box: nanamarika ny 5 taona an-tsehatra i Do B | NewsMada
CGM – Beat box: nanamarika ny 5 taona an-tsehatra i Do B
Anisan’ireo tanora fanta-daza eo amin’ny tontolon’ny “beat box”, matetika miara-dalana amin’ny mozika rap, i Do B. Heverina fa tsy misy tsy mahafantatra azy raha mbola mpiangaly ity taranjan-javakanto iray ity. Vao dimy taona anefa no niakarany an-tsehatra sy nanehoany izany talentany izany.
5 taona, izay nomarihina tamin’ny fampisehoana miavaka, tetsy amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) etsy Analakely, ny asabotsy tolakandro teo. Tsy fahita firy tokoa ny hetsika, nanamarihana ity tsingerin- taona ity niaraka tamin’ny mpanakanto samihafa. Nisongadina ihany koa ny fahamaroan’ny mpijery manamarika fa mankafy ny kanto avoakan’ny talentan’i Do B izy ireo. Nisy mihitsy aza ireo tsy tafiditra tao anaty efitranon’ny CGM, izay tsy nampoizin’ity mpanakanto ity mihitsy, araka nambarany ao amin’ny pejy tambajotran-tserasera.
Ankoatra ny hoe fanamarihana ny dimy taona niakaran’i Do B an-tsehatra, nentina indrindra hanaovana asa soa ho an’ireo fianakaviana tena sahirana. Tsy fahita firy ny fihetsika toy izao rehefa misy ny fety enti-manamarika tsingerin-taona. Antenaina ny hitohizan’izany.